Izenzo ezinhle kakhulu zokumaketha nge-imeyili: Kuyini ukufudumala kwe-IP? | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 25, 2020 NgoLwesine, ngoMashi 26, 2020 Douglas Karr
Uma inkampani yakho ithumela amakhulu ezinkulungwane zama-imeyili ngokulethwa ngakunye, ungangena kwezinye izingqinamba ezibalulekile nabahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi bahambisa wonke ama-imeyili akho kufolda engenamsoco. Ama-ESP avamise ukuqinisekisa ukuthi athumela i-imeyili futhi avame ukukhuluma ngokuphakama kwawo amazinga okulethwa, kepha lokho empeleni kufaka ukuletha i-imeyili kufayela le- ifolda engenamsoco. Ukuze ubone empeleni i- ukulethwa kwebhokisi lokungenayo, kufanele usebenzise ipulatifomu yomuntu wesithathu njengabalingani bethu ku 250ok.
Yonke iseva ethumela i-imeyili inekheli le-IP elihambisana nayo, futhi ama-ISPs agcina izinkomba zalawa makheli we-IP nokuthi mangaki ama-bounce kanye nezikhalazo zogaxekile abazithola kubasebenzisi babo ku-imeyili ethunyelwe ivela kulawo makheli e-IP. Akuvamile ukuthi amanye ama-ISP athole izikhalazo ezimbalwa futhi ngokushesha ahambise wonke amanye ama-imeyili kufolda engenamsoco esikhundleni sebhokisi lokungenayo.
Ukuthuthela kumhlinzeki wesevisi ye-imeyili omusha
Ngenkathi uhlu lwakho lwababhalisile lungaba ababhalisile be-imeyili abangu-100% abasemthethweni abakhethe ukungena, noma abakhethe ukungena kabili, kuma-imeyili wakho wokumaketha… ukufudukela kumhlinzeki wesevisi we-imeyili omusha nokuthumela kulo lonke uhlu lwakho kungabikezela ukubhujiswa. Izikhalazo ezimbalwa zingathola ukuthi ikheli lakho le-IP lihlatshwe umkhosi futhi akekho noyedwa ozothola i-imeyili yakho ebhokisini labo lokungenayo.
Njengomkhuba omuhle kakhulu, lapho abathumeli abakhulu bethuthela kumhlinzeki wesevisi we-imeyili omusha, kunconywa ukuthi ikheli le-IP libe sekufudumele. Okusho ukuthi, ugcina umhlinzeki wesevisi wakho we-imeyili ngenkathi ukhulisa inani lemiyalezo oyithumela ngensizakalo entsha… uze wakhe igama lalelo kheli le-IP elisha. Ngokuhamba kwesikhathi, ungathutha yonke imilayezo yakho kepha awufuni ukukwenza ngasikhathi sinye.
Ukumaketha Nge-imeyili: Kuyini Ukufudumala kwe-IP?
Njengokufudumala kuqukethe ukwanda kancane kancane kobukhulu bomsebenzi womzimba ukufudumeza imisipha nokunciphisa ubungozi bokulimala, ukufudumala kwe-IP kuyinqubo yokwengeza okuhlelekile kwevolumu yomkhankaso njalo ngesonto kukheli elisha le-IP. Ukwenza kanjalo kuzosiza ekwakheni idumela lokuthumela elihle nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi (ISPs).
Ukufudumala kwe-Smart IP: Isinyathelo Sokuqala Sokulethwa Kwe-imeyili
I-infographic Yokufudumala Kwe-IP
Le infographic evela e-Uplers ichaza futhi ikhombisa izindlela ezihamba phambili ze- ukufudumeza ikheli lakho le-IP nomhlinzeki wakho omusha we-imeyili, ekuhamba ngezinyathelo eziyisihlanu:
Qiniseka ukuthi ulandela yonke imikhuba ehamba phambili yokulethwa kwe-imeyili ngaphambi kokuthumela ama-imeyili amaningi okushisa kwe-IP.
I-IP yakho ezinikele kufanele ibe nerekhodi lesikhombi elisethwe ku-DNS yakho ebuyela emuva (Isizinda Segama Lesizinda).
Hlukanisa ababhalisile be-imeyili ngokuya ngokuzibandakanya kwabo nama-imeyili wakho wangaphambilini.
Ukhiye wokufudumala kwe-IP ngempumelelo kukhulisa kancane kancane inani lama-imeyili owathumelayo.
Yenza inhlanzeko yokuthumela ngemuva kokuthumela.
Baphinde bakhombe okunye okuhlukile ngabahlinzeki abathile be-Intanethi (ISPS):
I-Yahoo, i-AOL, ne-Gmail yethula izingqinamba ezithile ngokuhlukanisa ama-imeyili abe ngama-bulks ahlukile, ngaleyo ndlela ibambezela ukulethwa kwe-imeyili. Kuzoxazululwa uma usuthumele ama-imeyili athile ngamamethrikhi amahle.
Ukubambezeleka kujwayelekile ku-AOL, Microsoft, naseComcast. Lokhu kubambezeleka noma ama-bounces angama-421 azophinda azame amahora angama-72. Uma ingeke ilethwe ngemuva kwalesi sikhathi, izobhampa njenge-5XX futhi irekhodi le-bounce lizogcinwa njengephutha le-421. Lapho idumela lakho selikhule, ngeke kusaba khona ukubambezeleka okuqhubekayo.
Tags: I-AOLi-comcastumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliGmailumhlinzeki wesevisi ye-inthanethiukufudumala kwe-ipispihhovisiyahoo